उत्तम ब्ल्याकजेक गाइड र रणनीति - Gambling Papa
1 कालोज्याक के हो?
1.1 विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय उच्च-स्टेक कार्ड खेलको संक्षिप्त इतिहास
1.2 कौशल आवश्यकता एक उत्कृष्ट ब्ल्याकजेक प्लेयर हुन
2 ब्ल्याकज्याक कसरी खेल्ने?
2.1 ब्ल्याकज्याकका आधारभूतहरू
2.2 यसले लगातार जित्न के लिन सक्दछ?
3 कालोज्याक रणनीति चार्टहरू के हुन्?
3.1 संख्यात्मक व्युत्पन्न रणनीति गाइड
3.2 कुनै पनि स्टीमरोल बिना नै खेल्न सक्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ
4 ब्ल्याकजेक गाइड शुरुआतीहरूको लागि
4.1 नग्न आवश्यक
4.2 डिलरको हातमा ध्यान दिनुहोस्
5 ब्ल्याकजेक शर्त रणनीति
5.1 शुरुआतीहरूको लागि धेरै सामान्य विधिहरू
6 ब्ल्याकज्याकमा कार्ड गन्ती के हो?
6.1 जुवा खेल्दा घरको बिरूद्ध तपाईंको किनारा सुधार गर्न डिजाइन गरिएको एक प्रविधि
6.2 यी विधिहरू अघि बढाउन धेरै विधिहरू प्रयोग भैसकेका छन्
जब हामी ठुलो हुँदै जान्छौं, खाली समयको साथ हामीले आनन्द लिने चीजहरू पक्कै परिवर्तन भएको देखिन्थ्यो। जे होस्, दिनको अन्त्यमा, कुनै विशेष कुराको पर्वा नगरी, उही पुरानो सनसनी।
त्यसोभए, तपाईंले आफ्ना केहि साथीहरू टेबलमा बसेर रमाईलो रातको ’boutमा कुरा गरिरहनुभएको सुन्नुभएको छ? यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू मध्ये एक पनि एक सभ्य पैसा संग घर आयो। अब, तपाइँ अचम्म गर्न लाग्नु भएको छ कि ब्ल्याकज्याक एक सार्थक खोजी हुन सक्छ।
तपाईले कसलाई सोध्नु भएको छ मा निर्भर गर्दै, तपाईले एक मिलियन बिभिन्न उत्तरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
निस्सन्देह, सही चित्र जहिले पनि जटिल हुन्छ स्क्रिनमा केहि मासुली शब्दहरू भन्दा कहिल्यै व्यक्त गर्न सक्दैन। जे होस्, अर्को केहि अनुच्छेदहरूमा, हामी एक जोडदार प्रयास गर्नेछौं।
कालोज्याक के हो?
र सबैभन्दा पहिला, यस भव्य कार्ड गेमको ऐतिहासिक रेखांकन आवश्यक छ। यसको प्रख्यात कदको पूर्ण रूपमा मूल्यांकन गर्न, जहिले पनि जरामा हेर्नुपर्दछ। यद्यपि यो हाम्रो लागि सँधैको लागि रहँदै आएको छ, यो चीजहरूको भव्य योजनामा ​​तुलनात्मक रूपमा आधुनिक आविष्कार हो।
विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय उच्च-स्टेक कार्ड खेलको संक्षिप्त इतिहास
हाम्रो ज्ञानको सर्वश्रेष्ठ अनुसार, यो उत्तर पश्चिम युरोपमा शुरू भएको जस्तो देखिन्छ। बुद्धिमत्ताको युगको दौडान मनोरञ्जनको धेरै नयाँ रूपहरू भेट्टाइए। सुरुमा, यो केवल यसको आधुनिक रूपसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो धेरै वर्ष भन्दा बढीमा थियो कि यसले अन्ततः हामीले आकार पाउँदै आएको आकारलाई ग्रहण गर्‍यो।
अ card्ग्रेजी कार्ड गेम द्वारा, २१:
हामीसँग खेलको पहिलो रेकर्डहरू अंग्रेजी मध्य युगबाट लिइएको हो। सामान्यतया, यो मानिन्छ कि १00०० को बीचमा, परिचित कार्ड गेम, २१, जनसंख्याभरि नै चिनिएको थियो।
सबैभन्दा पहिले फ्रान्समा कतै १60 in० को दशकमा यसको आधुनिक रूप देखा पर्‍यो:
त्यहाँबाट, खेल च्यानल पार गर्‍यो र फ्रान्सेली गाउँमा आयात गरियो। जसो अधिक व्यक्तिहरूले यसलाई खेल्न सुरू गरे, नियमहरू यति थोरै परिवर्तन भए। यस प्रक्रियाको धेरै बर्षको परिणामको रूपमा, हामी ब्ल्याकज्याकको हात खेल्न टेबुलमा बस्न सक्दछौं।
कौशल आवश्यकता एक उत्कृष्ट ब्ल्याकजेक प्लेयर हुन
अब, हामी ऐतिहासिक anecdotes संग समाप्त। ब्रास ट्या्याकहरूमा तल झर्ने समय आएको छ। यदि तपाईं गम्भीर खेलाडी बन्न चाहानुहुन्छ भने, हामी निम्न सुविधाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिन्छौं। तिनीहरूको विकास गरेर, तपाईं कुनै पनि स्थितिको लागि राम्रो तयार हुनेछ एक पटक दांवहरू वास्तविक भएपछि।
धैर्य: सबै भन्दा माथि, अवसर को सबै भन्दा खेल संग जस्तै, ब्ल्याकज्याक इच्छाशक्ति को एक खेल हो। जो तनाव हटाउनेहरूका लागि, रातीको अन्तमा सुनले भरिएका जेबहरूको साथ बाहिर निस्केर धेरै सम्भावना हुन्छ।
विश्लेषणात्मक सोच: तपाईं सँधै आफ्नो कम्प्युटरमा नक्कली हातहरू खेल्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, एक पटक तपाईं प्रत्यक्ष अनलाइन क्यासिनो मा बस्नुभयो भने, तपाईंले धेरै बिर्सनुभयो। तपाईले के सिक्नु भयो। त्यसकारण, उडानमा सोच्न मास्टरफुल प्लेयरको आवश्यक गुण हो।
यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईं संख्याहरूको साथ राम्रो हुनुहुन्छ: यसका साथै गणित उपयोगी छ र जीवन भर अन्य ठाउँहरूमा पनि। राम्रो गणित सीप सिकेर, तपाईं टेबमा र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि लाभ उठाउनुहुनेछ।
ब्ल्याकज्याक कसरी खेल्ने?
यस बिन्दुमा, हामी शंका गर्छौं कि तपाईं खेल कसरी खेल्ने सिक्नको लागि सायद मर्दै हुनुहुन्छ। कम से कम, हामी अहिले सम्म तपाईलाई के भन्यौं हामीले सुने पछि हुनेछौं। यसैले हामीले निर्णय गर्यौं कि अब हाम्रो समय रोकिनेछ। यद्यपि हामीले आधारभूत कुराहरूमा जानु भन्दा पहिले हामी तपाईंलाई सावधानीको नोट जारी गर्न चाहन्छौं। यो केवल करुणा बाहिर छ।
तपाइँ सुरु गर्नु अघि:
घाटा हुने सम्भावनाको लागि तयारी गर्नुहोस्: उत्तम खेलाडीहरूले पनि खराब रात पाउन सक्दछन्। यदि तपाईं पहिले कहिल्यै जुवा खेल्नु भएको छैन भने, त्यसो भए क्यासिनोमा नलिनको लागि तपाईंले गुमाउन सक्ने भन्दा बढी नै लिनुहोस्। अन्यथा, तपाई खराब समयको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ जुन हुनु हुँदैन।
सबै कार्डहरू खेल नभएसम्म यो कहिले पनि नसक्नुहोस्: सरल शब्दमा भन्ने हो भने, आफैंलाई सेक्सी गर्नु सधैं तपाईंको विरुद्धमा सबैभन्दा ठूलो शत्रु हुनेछ। जब ती नमिल्दो जस्तो देखिन्छ कि उनीहरू तपाइँको बिरूद्ध उभिएका छन्, तब तपाईले अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ र आवाज मार्फत ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। यदि सफल भयो भने, तपाई विजयी हुनुहुनेछ एक पटक धूलो अन्तमा व्यवस्थित हुन्छ।
सुरु गर्न, हामी यस खेलको सबै भन्दा आधारभूत पक्षहरूमा जान्छौं। तिनीहरूलाई सिकेर, गाइडमा तल दिइएको जानकारी तपाईंलाई बुझ्नको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। यदि तपाईंले यो पहिले सुनेको भए पनि, द्रुत रिफ्रेसर उत्तम छ यदि तपाईं आफ्नो उत्तममा खेल्नको लागि गम्भीर हुनुहुन्छ भने।
महत्त्वपूर्ण सर्तहरू र महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू
डेक: डिलरले प्रयोग गर्ने विशाल स्ट्याकको लागि यो नाम हो जब तिनीहरूले पहिलो टेबलमा तपाईंको हात राख्छन्। धेरै जसो क्यासिनो वा अनलाइन क्यासिनो मा, डेक छवटा सामान्य 52२ कार्ड डेक समावेश गर्दछ।
प्राथमिक लक्ष्य: यस खेलमा, तपाईं जित्नको लागि दुई तरिकाहरू छन्, सामान्यतया। अधिकांश समय, तपाईं आफ्नो हातमा २१ को अन्तिम अनुहार मानको लागि लक्ष्य गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं यसलाई ठ्याक्कै हिट गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो शर्त को १. times गुणा जित्नुहुनेछ। यदि तपाईं २१ बर्षमुनि अवतरण गर्नुभयो भने, तपाईं स्वचालित रूपमा हराउनुहुनेछैन। मानौं कि डिलरले खेल २१ भन्दा माथि स्कोरको साथ समाप्त गर्दछ। त्यस अवस्थामा तपाईले डिफल्ट बाट जीत पाउनुहुनेछ। अवश्य पनि, जब तपाइँको हात २१ भन्दा माथि छ, तब तपाइँ आफैं पनि हराउनुहुनेछ।
कार्ड मानहरू: कहिलेकाँही, नियमहरू ठाउँ-ठाउँमा फरक हुन्छन्। यद्यपि, सामान्य रूपमा, तपाईं निम्न मानहरूमा भर पर्न सक्नुहुन्छ स्थिर रहनका लागि। २-१० देखि कार्डहरूका साथ, तपाईं केवल तिनीहरूको अनुहार मान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै उदाहरणहरूमा, सबै रोयल्टीको लागि, तपाईं तिनीहरूलाई १० मान दिन्छ।
ऐसको साथ, नियम स्थापनाको आधारमा फरक हुन्छन्: कहिलेकाँही, ती ११ को रूपमा गणना गरिन्छ। अन्य अवसरहरूमा मानिसहरूले उनीहरूलाई १ मान्दछन्। त्यहाँ केही टेबलहरू छन् जुन तपाईंलाई एक्का “जंगली” खेल्न अनुमति दिन्छ। ” यसैले, तपाईंलाई दुई हात विकल्पहरू मध्ये कुन कुन तपाईंको हातको लागि रुचि हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अवसर दिदै।
यसले लगातार जित्न के लिन सक्दछ?
सधैं जत्तिकै, घरको प्राय जसो परिस्थितिमा फाइदा हुन्छ। त्यसकारण, औसतमा, तपाइँ खेलाडीहरू रातको सुरुमा उनीहरूसँग भन्दा कम टाढा हिंड्ने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, त्यहाँ केहि मानिस छन् जो टेबुलमा बसेर एउटा नक्कल घाँटीको साथ नाफाको साथ टाढा जान्छन्। ती व्यक्तिहरूका लागि के त्यस्तो फरक छ? सामान्यतया, यो सबै लिन्छ रणनीति को एक सानो बिट छ। साथै, अनुशासनको सानो मोडिक कुनै पनि हालतमा खराब हुँदैन।
धेरै शौकहरू जस्तै, एक शिल्पकारको अनुभव उसको शिल्पको साथ मध्यस्थ हुन्छ, घातक मध्यस्थता सहित। यो एक शक्तिको अभिव्यक्ति हो जसले यसलाई चलाउनेहरूबाट मात्र महारत दावी गर्दछन्।
अवश्य पनि, क्यासिनोमा केवल अधिक समय खर्च गर्नाले तपाईं एक निपुण खेलाडी बन्नुहुनेछ भनेर निश्चित हुँदैन। जहाँसम्म, केहि समय अध्ययन नगरी, तपाईं निश्चित रूपले यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि सम्भावना पहिलो स्थानमा कहिल्यै अवस्थित छैन।
अनुशासनको साथ ट्रेन गर्न ड्राइभ:
यसबाहेक, यदि तपाईं एक पेशेवर बन्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले एक जस्तै प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ। टेलिभिजनमा केही प्रो सर्किटहरू हेर्नुहोस्। के तपाइँ सबै विशेष रूपमा सबै खेलाडीहरू सेयर गरेको जस्तो देख्नुहुन्छ? हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू विशाल दबाबको बाबजुद पनि राम्ररी केन्द्रित हुन सक्छन्। तपाईं सुरुमा एक प्रयास को प्रयास मा राखे बिना तपको प्रकारको विकास गर्दैन। हामी केवल अन्तिम परिणामहरू देख्दछौं, यद्यपि धेरै जसो समय, विकासको लागि वर्षौं लिन्छ।
कालोज्याक रणनीति चार्टहरू के हुन्?
यस विन्दुमा, तपाईं आफ्नो औंलाहरूलाई कालोज्याक रणनीतिको धेरै नै आधारभूतहरूमा डुबाउन तयार हुनुहुन्छ। कुनै पनि समय तपाईं क्यासिनोमा जानुहुन्छ, चारै तिर हेर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई केही चार्टहरू संरक्षकहरू बीच तैरिरहेको देख्नेछौं भनी आश्वासन दिन्छौं। जब तपाईं ती देख्नुहुन्छ, तपाईं ब्ल्याकज्याक तालिकामा तिनीहरूलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग सबै उदाहरणहरूमा, एकचोटि तपाईंले उनीहरूको एक झलक समात्नुभयो भने, यो ब्ल्याकजेक रणनीति चार्ट हुनेछ।
संख्यात्मक व्युत्पन्न रणनीति गाइड
स्पष्ट गर्नका लागि यी चार्टहरूको साथ तपाईले एक द्रुत निर्णय निर्माता पाउनुभयो। गम्भीर परिस्थितिहरूमा पनि सहि चाललाई याद गर्न गाह्रो छैन।
मानौं कि तपाईंले कहिल्यै टेबलको अ lying्गमा कार्डको संयोजन देख्नु भएको छैन। केवल यो चार्ट लिनुहोस्। त्यसो भए, सही चाललाई हेर्नुहोस्। ’cause यी गणितिय तरिकाले व्युत्पन्नको लागि चालहरू छन्, तपाईंको विडम्बनहरू यो विधि प्रयोग गरेर जहिले पनि संभव हुन्छ।
औसतमा अधिकतम परिणामहरू उत्पादन गर्न प्रमाणित:
अवश्य पनि, यदि तपाईं पत्रमा यी मध्ये एक पालना गर्नुहुन्छ भने, यसले प्रत्येक हातको लागि लाभदायक नतिजा निश्चित गर्दैन। यसले सम्भाव्यतालाई मात्र बढाउँदछ तपाईं चीजहरू बाहिर खेल्ने तरीकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। यसैले, रातभरि यसलाई प्रयोग गरेर, तपाईं औसतमा खुशी भन्दा टाढा जानुहुनेछ।
कुनै पनि स्टीमरोल बिना नै खेल्न सक्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ
क्यासिनो जति रमाईलो छ, हामी सधैं पहिलो पटकको आगन्तुकहरूलाई सावधानीको एक शब्द जारी गर्दछौं। तिनीहरू अघिल्लो ढोकामा पुग्नु अघि उनीहरूले अलि अलि बढी अध्ययन गर्नु पर्छ।
अन्यथा, ट्रान्समा पस्नको लागि तिनीहरूको लागि सजिलो छ केहि नबुझ्नु भए पनि। त्यसो भए, बेइमान अभिनेताहरूको लागि अनावश्यक गल्तीहरूमा दबाब दिन तिनीहरू सबै सजीलो हुन्छन् टेबलमा हुँदा।
तपाईंको परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, तपाईं आफ्नो स्थितिको लागि उपयुक्त चाललाई अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ:
त्यस्ता चीजहरूको बिरूद्ध आफैंलाई सुसज्जित बनाउन, तपाईं जति बढी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। ज्ञानको साथ, तपाई सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुनेछ जो कोही तपाईको फाइदा लिन खोज्दैछन् तपाई एक पटक भुईमा हुँदा। केवल आफ्नो पेट मा सुन्नुहोस्। धेरै जसो समय, यसले तपाईलाई थाहा दिन्छ कि कसरी सबै चीज सहज हुँदै जान्छ।
यदि तपाईं मानचित्र पढ्न सक्नुहुनेछ, तपाईं यी मध्ये एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
यस बाहेक यी चार्टहरू मध्ये एकको साथ तपाई सँधै आरामदायक महसुस गर्नुहुनेछ। मानौं तपाईं हात जित्नुभएपछि केही मार्टिनस पिउनुहुन्छ। जो कोही सानो सुझाव दिए पनि यिनीहरूसँग यी चार्टहरू मध्ये कुनै एक पढ्न सक्छ। कम्तिमा पनि, हामी क्यासिनोमा लिएका सबैले तिनीहरू मध्ये एकको साथ ठीक गर्न सक्षम भएको छ। उही तिनीहरूका सबै साथीहरूको लागि पनि भन्न सकिन्छ।
ब्ल्याकजेक गाइड शुरुआतीहरूको लागि
त्यसो भए, मानिलिनुहोस् कि तपाईं एन्चवेबाट पैन्थोनमा जानुभयो जुन क्यासिनोको अगाडिको ढोका हो। तपाइँले त्यस क्षणलाई भेट्नुपर्दा कस्तो प्रकारको मानसिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ? चिन्ताको वशीकरणबाट आफ्नो दिमागलाई छोड्दा, मानसिक जटिलता स्वाभाविक रूपमा बढ्दछ। यी सबै तपाईंमा एक अव्यक्त बलको रूपमा निहित छ।
जे होस्, सहि रणनीतिको साथ तपाईले कहिले पनि यस्तो महसुस गर्नुहुन्न कि तपाईको नक्कल पसिना छ।
उही थकित, नम्र, र स्पष्ट चुनौतीको जवाफको सट्टामा, तपाईं डेन्यूबभर एक असभ्य चार्ज हुनुहुनेछ।
अन्यथा, कसरी कसैले यस्तो आत्मविश्वास र स्वैगरको वर्णन गर्न सक्छ?
सामान्यतया, यस्तो आभा केवल ती व्यक्तिहरूबाट मात्र उत्पन्न हुन्छ जसको जेबमा खजानाले लादिएका हुन्छन्, जुन क्षणको पछि मात्र खतरनाक थियो।
& lt; म & gt; यदि यो केहि छ जुन तपाइँलाई अपील गर्दछ, तब हामीले ठूलो खबर पायौ।
आवश्यक सूचीको निम्न सूचीमा, हामीले तपाईंको बैंक खातामा केही टिप्पणीहरू थप्न आवश्यक कोर अवधारणाहरूको सारांश प्रस्तुत गर्‍यौं। हो, सबैको नतिजा फरक-फरक हुन्छन्। किनकि ब्ल्याकज्याक एक मौकाको खेल हो, पेशेवरहरूले पनि घरलाई यस्तो डिग्रीमा खेल्न सक्छन्।
त्यस पछाडि, जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिको एक हिस्सा मात्र हो, कुनै पनि प्रकारको कार्ड गणना।
यदि तपाईंसँग तयार गर्न केहि क्षणहरू छन् भने, तपाईं उन्मादी मैदानमा जानु अघि के सिक्न चाहनुहुन्छ? तपाईं संसीनत रणनीतिहरूको निम्न सूची पढ्ने बित्तिकै त्यस परिस्थितिमा बाँच्ने मान्छेको जुत्तामा आफूलाई राख्नुहोस्।
यदि तपाईको हालको हात १२-१– बीचमा छ भने डिलर २–6 बीचमा देखाउँदछ भने तपाईले खडा हुनुपर्दछ:
जब विकल्प दिइन्छ, स्ट्यान्डिंगले तपाईंलाई लाइनमा कुनै थप पैसा नराखीकन तपाईंको हात खेलमा राख्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं डिलरलाई दबाब दिन चाहनुहुन्छ र चीजहरू कसरी खेल्छन् भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यो धेरै जसो अवसरहरूमा उत्तम विकल्प हुनेछ। अवश्य पनि, जब सहि पल आउँदछ, तपाईको वास्तविकतालाई साकार तुल्याउन, रहनुको सट्टा दोब्बर बनाउने विचार गर्नुहोस्। यदि तपाईं सहि कल गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं केहि मिठाई कमाई संग घर हिंड्नुहुनेछ, सबै एकै समय निर्णय बाट।
यदि तपाईंसँग १२-१-16 बीचमा छ भने डिलरले7वा माथिको ’boutमा देखाउँदछ भने तपाईंले हिट गर्नुपर्दछ: सामान्यतया यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ मानिसहरूले दबाब महसुस गर्न थाल्छन्। आधाभन्दा बढी कार्डहरू जुन तान्न सकीन्छ त्यसले तपाईंलाई २१ भन्दा माथि जान्छ। स्पष्टतः अधिकांश व्यक्तिहरू उनीहरूको टाउकोको अलि पर पुगे जस्तो लाग्छ यदि उनीहरू आफैंलाई ती नराम्रा चीजहरू हेरिरहेका छन् भने। जहाँसम्म, तपाईले शर्तलाई बेवास्ता गर्नुहुने भएपछि, डिलरलाई समस्याहरूको परीक्षण गर्न दिँदै, अन्तिम अन्तिम क्षणमा परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ।
जब तपाईं एक जोडी वा ss को एक जोडी छ, तब तपाईं विभाजित गर्नुपर्छ:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, त्यस्ता चीजहरू जुन प्रायजसो एक व्यक्तिले श suspect्का गर्ने भन्दा बढी भएको थियो, फिल्महरूद्वारा निर्णायक बनाएर। जे होस्, धेरै धोकेबाजहरूले आफूलाई खेलबाट बाहिर निकाल्दछन् डिलरले आफैलाई खुट्टामा गोली हान्नको लागि मौका पाउनु अघि। यदि तपाईं केहि अधिक सेकेन्डको लागि आशाको अन्तिम स्लिभरमा टाँसिरहनुभयो भने, त्यसपछि तपाईं केही फरकको ’boutमा सपना देख्नुहुनेछ। । जब श in्का लाग्छ, समाउन कोसिस गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईले लाइनमा केहि अरू नराख्नु हुन्छ, तपाईले आफूसँग भएको सबै चीज दिनुहोस्। आखिरमा के हुन सक्छ भनेर कसलाई थाहा छ?
११ मा डबल डाउन गर्नुहोस् जब डिलरले २-१० देखाउँदछ: अब हामी सूचीबाट केही उन्नत प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गर्दैछौं। तपाईंले माथि सूचीबद्ध मास्टर् गरिसकेपछि, तपाईंले इरिडसेन्ट क्यासिनो चिप्सको सानो भण्डार जम्मा गर्नु पर्छ। जब सम्म तपाईं व्यर्थावृत्ति हुनुहुन्न, यसमा थोरै समय लाग्नेछ जब तपाईं यसको पर्दा एक पल्ट आफ्नो थप्पडमा खिच्नुहोस्। सही तरीकाले खजाना ट्रोभ राख्नका लागि तपाईंले कलात्मक डबल-डाउनको यस सीपको मास्टर गर्नुपर्छ। एक राम्रो समय शर्त संग, तपाईं कुनै अतिरिक्त घाटा नलगाई आफ्नो आय दोगुना गर्नुहुन्छ। अवश्य पनि, तपाई घरलाई हरेक हातले हराउन सक्नुहुन्न। अझै पनि, तथ्या्कहरू सबैको साथ खेल्नका लागि उपलब्ध छन्।
तपाईको हात or वा कम भएकोमा थिच्नुहोस्: सब भन्दा साधारण, यदि तपाईको हात six भन्दा कम छ भने, डिलरलाई अर्को कार्डको लागि सोध्नुहोस्। जब तपाइँको हात कम छ, केहि पनि तपाइँ बस्ट गर्न को कारण छैन। केवल एउटा प्रश्न, के तपाईंको हातमा यसमा दुई प्रकारको प्रकार छ। यदि हो भने, त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई सम्भावित रूपमा दुई छुट्टै हातमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। सावधानीको एक शब्दको रूपमा, यदि तपाईंले अघिल्लो उदाहरणमा जस्तै कार्डहरू विभाजित गर्नुभयो भने, यसैले टेबुलमा थप शर्त लगाउन आवश्यक पर्दछ।
डिलरको हातमा ध्यान दिनुहोस्
सबै पछिल्ला उदाहरणहरूमा, प्राथमिक ध्यान तपाईंको हातमा के थियो त्यसमा थियो। तिनीहरूका लागि जो वास्तवमै ब्ल्याकजेक मास्टर गर्न चाहन्छन्, यसलाई केहि अलि जटिल केहि चीज आवाश्यक हुन्छ। अन्यथा, तपाईं औसत जो भन्दा कहिल्यै राम्रो हुनुहुनेछ जसले केवल उनीहरूको स्मार्टफोनमा कहिल्यै इलेक्ट्रोनिक ब्ल्याकजेक खेलेका छन्।
ब्ल्याकजेक शर्त रणनीति
हुनसक्छ, यो केवल समयको लागि एउटा नियम हो। जेसुकै भए पनि, लोखुको काम कार्यको स्पष्ट स्पष्ट परिणामलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ।
याद गर्नुहोस्, यदि तिनीहरू बस्टमा गए भने, तपाईंको हात मूल्यले खास फरक पार्दैन:
जबसम्म तपाईं प्रत्येक पक्ष जान्नुहुन्छ, लिजेन्डको बराबर उचाइ प्राप्त गर्नु धेरै यथार्थपरक छ धेरै जना स्वीकार्न इच्छुक छन्।
शुरुआतीहरूको लागि धेरै सामान्य विधिहरू
अझै, सम्भ्रान्त पेशेवर खेलाडीहरूको लिग त्यो कपडाबाट काटेको भन्दा बिलकुलै फरक लिगबाट हो।
कहिलेकाँही, जित्ने क्रममा, तिनीहरूलाई खेलबाट जबरजस्ती गर्न सजिलो हुन्छ:
तपाईंको एक्जिटहरूलाई सही ढing्गले समेटेर, तपाईं सकेसम्म लामो समयसम्म रहनुहुनेछ जसले गर्दा डीलरहरूलाई आफैंमा उडाउन प्रशस्त समय दिइनेछ।
तपाईलाई अध्ययन गर्न केहि आधारभूत रणनीतिहरू
आधारभूत कार्ड गन्ती
रणनीति कार्ड चार्ट
हेल मरियम दृष्टिकोण
ब्ल्याकज्याकमा कार्ड गन्ती के हो?
कार्ड गणनाको चित्रण यति लोकप्रिय भएकोले करोडौं चासो जगाउने व्यक्तिहरूले प्रश्न सोध्न थालेका छन्।
सिद्धान्त मा, यो एक अपेक्षाकृत सीधा अवधारणा हो। यो यस्तै हुन्छ कि धूर्त गणितज्ञहरूको हातमा क्रान्तिकारी प्रभावहरू हुन्छ।
जुवा खेल्दा घरको बिरूद्ध तपाईंको किनारा सुधार गर्न डिजाइन गरिएको एक प्रविधि
मुख्य रूपमा, तपाईंले के गर्नुपर्दछ संख्यात्मक प्रणाली सिर्जना गर्नु हो जसले तपाईंलाई सजिलै खेलमा भएको कार्डहरूको फ्रिक्वेन्सी ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। तदनुसार, कुनै पनि stratagem कि सफलता को मौका भाँच्न को लागी प्रयोगकर्ताहरु लाई मेरो mnemonic उपकरणहरु मा चाँडो घटाउन को लागी अनुमति दिनु पर्छ। धेरै जसो, यो केवल हाम्रो खराब मेमोरी हो मानवको रूपमा जसले कार्ड गणनालाई अरू लाखौंले अधिक प्रभावकारिताको साथ प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ।
यी विधिहरू अघि बढाउन धेरै विधिहरू प्रयोग भैसकेका छन्
“+१, ०, -१” दृष्टिकोण:
तपाईले कसलाई सोध्नु भयो त्यसको आधारमा तपाईलाई केहि फरक उत्तर दिइनेछ कि कुन कार्डले विशिष्ट सम्प्रदायहरू प्राप्त गरे। जेसुकै होस्, सिद्धान्तहरू कुनै पनि केसमा उस्तै रहन्छ।
सामान्यतया, तपाईले कार्डहरूको केहि अंश लिनुहुनेछ।
उदाहरण को लागी, मानौं कि तपाई अनुहार मानहरु संग select भन्दा कम कार्डहरु छान्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईले ’emलाई -१ को मान दिनुहोस्। समान विधि अनुसरण गर्दै, कार्डहरूलाई शून्यको मान निर्दिष्ट गरीएको अनुहार मान सात र १० बीचको हुन्छ। अन्तमा, सबै बाँकी कार्डहरूमा प्लस वन मान निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
पछि, कार्डहरू तालिकामा तल उडान सुरू गरेपछि, आफ्नो टाउकोमा चालु कुलको ट्र्याक राख्नुहोस्।
प्रत्येक पनी कार्ड ट्याबलेटटपमा हिट हुने बित्तिकै अघिल्लो योगफलबाट कुलमा यसको निर्दिष्ट मूल्य थप्नुहोस्।
तपाइँले थाहा पाउनुहुनेछ कि यो चालमा हिड्ने बेला भयो जब तपाईले एक चलाएको कुलको रूपमा एक लिपिसड नम्बर मास्कर्डिंग पाउनुभयो। चाहे यो सकारात्मक वा नकारात्मक हो, त्यस बिन्दुमा, यसको मतलब हड्डीको डेकहरू हुन्।
सबै चीजहरू जीवनमा समान भएकोले, दिनको अन्त्य सम्ममा, तपाईं केही सांख्यिकीय विसंगतिहरू देख्नुहुनेछ जुन सन्तुलनलाई गुडमा फेरि ल्याइन्छ। एक चोटि सन्तुलन पुनर्स्थापना भएपछि तपाईसँग सास फेर्न केहि समय हुनेछ।
चेतावनीको अन्तिम शब्दको रूपमा सम्झनुहोस्, यो धेरै शुरुआतीहरूको लागि रातको सबैभन्दा खतरनाक अंश हो। सफलताको झलक अनुभव गरे पछि, ब्रेकमा अलि अलि बढाउँदा कसरी सिक्ने महत्त्वपूर्ण छ। संयम बिना, तपाईं ईन्धनको बाहिर चलाउनु हुनेछ। यो अर्को काउन्टडाउन पनि सुरुआत प्याडमा सुरु हुन अघि हुन सक्छ।